Ithegi: uyilo | Martech Zone
Sisebenza nefemu yesizwe ngoku ukuphuhlisa itemplate ye-imeyile yokuthengisa ngokwesiko kwisebe ngalinye nakwiiyunithi zeshishini. Kungenxa yokuba abathathi-nxaxheba, iikontraki, kunye nabaqambi bonke bekude, uyilo wavelisa iindlela zakhe kwaye wasebenza kwiinguqulelo kunye neqela lakhe lobunkokeli-emva koko wayinikezela kwiqela lethu ukuze liphendule ngokufaka iikhowudi nokuphumeza. Umyili undazise kwi-Abstract. Abstract sisixhobo esisebenzayo kwi-Intanethi seMac apho inkampani yakho, iikontraki,
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, bendincedisa ekuphuhliseni nasekuhlanganiseni imeko ye-WordPress elungiselelwe umthengi. Kukulinganisela kwesitayile, ukwandisa iWindowsPress ngamasimi esiko, iintlobo zeposi zesiko, isakhelo yoyilo, umxholo womntwana, kunye neeplagi zesiko. Elona candelo linzima kukuba ndiyenza ukusuka kwiindlela ezilula zokungena kwiplatifomu yokuprinta. Ngelixa liqonga eliqinileyo lokuboniswa kunye noyilo, aluguquleli ngokulula kwi-HTML5 kunye ne-CSS3.